Ahoana no matory soavaly? Mijoro sa mandry? | Soavaly Noti
Ny soavaly, toy ny biby rehetra ary indrindra ny biby mampinono, dia mila miala sasatra. Fa raha vao sambany misy isika, azo antoka fa hisy fisalasalana maro manameloka antsika momba ny torimason'izy ireo.
Raha te hikarakara azy ireo tsara ianao, manome azy ireo ny fiarovana ilain'izy ireo hatoriana, manasa anao izahay hamaky ity lahatsoratra ity izay hazavaiko ahoana no matory soavaly.
1 Ora firy isan'andro no matory soavaly
2 Fa maninona no matory mijoro ny soavaly?
3 Manonofy ve ny soavaly?
Ora firy isan'andro no matory soavaly
Tsy toy ny felines, izay mpiremby ary, noho izany, afaka matory tsy an-kiato mandritra ny ora maro (ho fahalianana milaza fa matory 24 ora ny liona olon-dehibe tsara ... na mihoatra, ary ny liona 18 ora), tsy matory ny soavaly. afaka manome izany rendrarendra izany amin'ny alàlan'ny biby remby izy ireo. Izany no antony, matetika rehefa mahita azy ireo mijoro na mandry isika, toa matory, eo amin'ny rantsan-tongony mihitsy izy ireo.
Raha raisintsika an-tsaina izany dia sarotra ny mahafantatra hoe adiny firy izy ireo no matory, satria miankina betsaka amin'ny taonany koa izany (matory ny tanora noho ny olon-dehibe). Saingy amin'ny ankapobeny dia fantatsika fa matory ireto manaraka ireto izy ireo:
Potro: fitsaharana antsasak'adiny isaky ny misy andro.
Manomboka amin'ny enim-bolana: 15 minitra isan'ora.
olon-dehibe: 3 ora niparitaka tontolo andro.
Fa maninona no matory mijoro ny soavaly?
Mba tsy ho remby mora, soavaly dia namorona rafitra anatomika ao amin'ny rantsambatana izay tazonina ao anaty fihenjanana. Ny fitaovana fanohanana mifamaly dia mamela azy ireo hitazona ny rantsam-batana miitatra amin'ny ezaka kely noho ny fitambarana tendany sy ligamenta tonga lafatra. Indraindray ny biby dia mifandimby ilay tongotra manitatra amin'ilay iray miolakolaka.
Fa ankoatry ny matory mitsangana, izy ireo koa dia manao azy mandry. Mazava ho azy, tsy fahita izany, fa raha mahatsapa tena mahazo aina sy milamina izy ireo dia handry amin'ny tany hiala sasatra.
Manonofy ve ny soavaly?
Ny marina izany Eny, mandritra ny dingana Rem, fa tsy afaka fantatsika velively izay tena nofinofisin'izy ireo. Fa koa, tena zava-dehibe ny famelantsika azy ireo hiala sasatra, satria raha tsy izany dia mety hanimba ny fahasalamany ary na ny ain'izy ireo aza.
Ahoana ny hevitrao momba an'io lohahevitra io? Mahaliana, sa tsy izany? 🙂
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » ny hafa » About us » Ahoana no matory soavaly?